Maamulka Puntland oo eedaymo u jeediyay dowladda Dhexe | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Maamulka Puntland oo eedaymo u jeediyay dowladda Dhexe
Maamulka Puntland oo eedaymo u jeediyay dowladda Dhexe
Wasiirka Amniga Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdisamad Maxamad Gallan ayaa sheegay in shakhsiyaad magaca Soomaaliyeed wata wakhtigoodiina dhamaaday ay kala irdheeyaan dadka soomaaliyeed sida uu hadalkiisa u dhigay.
Wasiirka oo ka hadlayay kulan ka dhacay Garoowe ayaa sheegay in Madaxda dowladda Soomaaliya ee muddo xileedkeeda uu ka dhamaaday ay ka Shaqeeynayaan sidii loo burburin lahaa Maamulka Puntland, isla markaana dhaqaalo ku bixinayaan.
Wasiir Gallan waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya Madaxdeeda aysan ka hadlin weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen Xabsiga Dhexe ee Magaalada Boosaaso, taas beddelkeedana ay degaannada Puntland ka wadaan kicin dadweyne iyo inay abuuraan khalalaaso.
Ugu dambeyn Wasiirka Wasaaradda Amniga Maamulka Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa sheegay in howlaha ay Madaxda dowladda Soomaaliya ka abaabulayaan magaalada Muqdisho in aysan aheyn wax laga sugi karo oo ah dawadii Soomaaliya.
Hadalka Wasiirka Wasaaradda Amniga Maamulka Puntland ayaa kusoo aadayaa xilli uu xoogeysaty khilaafka Siyaasadeed ee u dhaxeeya Madaxda dowladda Soomaaliya iyo Puntland.
Next articleMadaxda maamulada Soomaaliya iyo xubnaha beesha caalamka oo kulan yeeshay